Fampianarana fandriam-pahalemana ho an'ny zom-pirenena: fomba fijery ho an'i Eoropa Atsinanana - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Septambra 20, 2021 Opinion 0
(Navoaka avy amin'ny: Pravdoshukach, 5 septambra 2021.)
Nosoratan'i Yurii Sheliazhenko
Eoropa Atsinanana tamin'ny taonjato 20-21 dia nijaly mafy tamin'ny herisetra ara-politika sy ny ady mitam-piadiana. Fotoana hianarana hiara-hiaina am-pilaminana sy hikatsahana fahasambarana.
Ny fomba nentim-paharazana hanomanana ny tanora handray anjara amin'ny fiainana politika olon-dehibe any amin'ny firenena fiaraha-miasa Atsinanana sy i Russia dia mbola fitaizana antsoina hoe fitaizana tia tanindrazana. Tany amin'ny Firaisana Sovietika, olom-pirenena idealy dia hita ho mpanafika tsy mivadika raha tsy misy fanontaniana.
Amin'ity paradigma ity, ny fitsipi-pifehezana ara-tafika dia maodely ho an'ny fiainana sivily tsy anisany ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny sehatry ny politika. Mazava ho azy fa izay karazana tsy mety manao miaramila noho ny feon'ny fieritreretana, toy ny mpanaraka ny “apôstôlin'ny tsy fanaovana herisetra” Leo Tolstoy sy ny Protestanta, dia noterena nandritra ny fampielezan-kevitra nanohitra ny «sekta» sy ny «cosmopolitism».
Nandova an'ity paradigma ity ny firenena taorian'ny fiadiana ny soviet ary mbola mitaiza ny miaramila mpankato kokoa noho ny mpifidy tompon'andraikitra. Ny tatitra isan-taona nataon'ny Birao Eoropeana ho an'ny fanoherana ny fieritreretana (EBCO) dia mampiseho fa ireo sora-baventy any amin'ny faritra dia manana fotoana kely na tsy misy fanekena ara-dalàna ny fanamelohan'izy ireo ny ady sy ny fandavany hamono.
Araka ny fampahalalana an'i Deutsche Welle, tamin'ny taona 2017 tamin'ny fihaonambe iraisam-pirenena tao Berlin dia niresaka momba ny loza mety hateraky ny fitaizan-tanindrazana aorian'ny miaramila ny soviet, izay mampiroborobo ny fahefana tsy refesi-mandidy any Russia sy ny politika farany ankavanana any Ukraine. Nilaza ny manam-pahaizana fa mila fanabeazana demokratika maoderina ho an'ny zom-pirenena ny firenena roa tonta.
Na dia talohan'izay aza, tamin'ny 2015, ny birao federaly alemana sy ny maso ivoho federaly ho an'ny fanabeazam-pirenena dia nanohana ny tambajotra Eoropeana Atsinanana ho an'ny fanabeazam-pirenena (EEN), tambajotranà fikambanana sy manam-pahaizana mikendry ny fampandrosoana ny fanabeazana ho olom-pirenena any amin'ny faritra Eropa Atsinanana, anisan'izany i Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, ary Ukraine. Ireo mpandray anjara amin'ilay tamba-jotra dia nanao sonia memoara, izay maneho fanoloran-tena feno fahasahiana amin'ny hevitry ny demokrasia, ny fandriampahalemana ary ny fampandrosoana maharitra.
Ny hevitra hisorohana ny ady amin'ny fanabeazana sivika ho an'ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia azo zahana amin'ny asan'i John Dewey sy Maria Montessori. Nolazaina tamim-pahalalana tao amin'ny Lalàm-panorenana UNESCO ary naverimberina tao amin'ny Fanambarana momba ny zon'ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 2016 natolotry ny fivorian'ny fivoriamben'ny firenena mikambana: ny fandriampahalemana dia tsy maintsy hatsangana. ”
Ny filàna ara-pitondran-tena eran-tany hampianarana ny fandriam-pahalemana dia mahery vaika ka na ny fenitry ny fitaizan-tanindrazana aza tsy afaka nanakana ireo mpampianatry ny fandriam-pahalemana mafana fo any amin'ny Firaisana Sovietika sy ireo firenena taorian'ny soviet mba hampianatra ny taranaka ho avy fa ny olona rehetra dia mpirahalahy ary tokony hiaina am-pilaminana. .
Raha tsy mianatra ny fototry ny tsy herisetra, ny olona any Eoropa Atsinanana dia mety handatsa-dra bebe kokoa mandritra ny fandravana ny fanjakan'ny kaominista, ny fifandonana politika sy sosialy-toekarena manaraka. Fa kosa, Ukraine sy Belarus dia nandao ny fitaovam-piadiana niokleary, ary i Russia dia nanimba ny 2 692 tamin'ireo fitaovam-piadiana niokleary afovoany. Ary koa, ny firenena Eoropeana Atsinanana rehetra afa-tsy i Azerbaijan dia nanolotra serivisy sivily hafa ho an'ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon'ny fieritreretana, izay raha zahana dia tsy azo idirana sy manasazy fa mbola mandroso kosa raha oharina amin'ny tsy faneken'ny Sovietika tanteraka ny zon'ny mpanohitra ny feon'ny fieritreretana.
Manao fandrosoana kely izahay amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana any Eoropa Atsinanana, manan-jo hankalaza ireo zava-bita isika, ary misy vaovao am-polony am-polony maro ao amin'ny faritra misy anay isan-taona momba ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana 21 septambra any an-tsekoly sy oniversite. Na izany aza, afaka manao zavatra bebe kokoa isika.
Matetika, ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia tsy tafiditra mazava ao anatin'ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly, fa ny singa ao aminy dia azo ampiharina amin'ny taranja fanabeazana ofisialy, toy ny fototry ny siansa sosialy sy ny maha-olombelona. Raiso, ohatra, ny tantaran'izao tontolo izao: ahoana no ampianarako azy nefa tsy milaza ny hetsika fandriam-pahalemana aho tamin'ny taonjato faha-19-20 sy ny iraky ny Firenena Mikambana hametraka fandriampahalemana eto an-tany? HG Wells dia nanoratra tao amin'ny "The Outline of History": "Ny fahatsapana ny tantara amin'ny maha-zava-dehibe ny fiainan'ny olombelona rehetra dia ilaina amin'ny fandriampahalemana ao anatiny ary toy izany koa amin'ny fandriampahalemana eo amin'ireo firenena."
Caroline Brooks sy Basma Hajir, mpanoratra ny taona 2020 dia nitatitra «Fanabeazana fandriam-pahalemana any amin'ny sekoly ofisialy: maninona no zava-dehibe ary ahoana no fomba hanaovana azy? antony fototra, tsy misy ny fampihenana ny herisetra, amin'ny alàlan'ny fifampiresahana sy fifampiraharahana, ary ahafahan'ny tanora tonga olom-banona tompon'andraikitra misokatra amin'ny fahasamihafana sy fanajana ny kolontsaina hafa. Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia misy koa lohahevitra sy olana momba ny zom-pirenena, ny rariny ara-tsosialy ary ny tontolo iainana.
Ao an-dakilasy, amin'ny toby fahavaratra, ary amin'ny toerana mety rehetra, mifanakalo hevitra momba ny zon'olombelona na tanjona kendrena fampandrosoana maharitra, fanofanana ny fanelanelanana ataon'ny namana ary ny fahaiza-manao malefaka amin'ny fiainana ara-tsosialy sivilizasiona dia ampianarinay ho an'ny fandriam-pahalemana ny olom-pirenena eropeana sy ny olona any Tany, planeta renin'ny olombelona rehetra. Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia manome mihoatra ny fanantenana, tokoa, manome fahitana fa ny zanatsika sy ny zanaky ny zanatsika dia afaka misoroka ny tahotra sy ny fanaintainana ankehitriny amin'ny fampiasana sy ny fampivoarana rahampitso ny tsara indrindra amin'ny fahalalantsika sy ny fampiharana ny fandriam-pahalemana mamorona sy demokratika mba tena olona sambatra.
Yurii Sheliazhenko dia sekretera mpanatanteraky ny Hetsika Pacifist Okrainiana, mpikambana ao amin'ny Birao ao amin'ny Birao Eoropeana misahana ny fanoherana ny feon'ny fieritreretana, mpikambana ao amin'ny Board of World BEYOND War. Nahazo mari-pahaizana Master of Mediation and Conflict Management izy tamin'ny 2021 ary mari-pahaizana Master of Laws tamin'ny 2016 tao amin'ny KROK University, ary mari-pahaizana bakalorea tamin'ny taona 2004 tao amin'ny Oniversite Nasionalin'i Taras Shevchenko Kyiv. Ankoatry ny fandraisany anjara amin'ny hetsika fandriam-pahalemana dia mpanao gazety, bilaogera, mpiaro ny zon'olombelona ary manam-pahaizana momba ny lalàna izy, mpanoratra famoahana akademika am-polony, ary mpampianatra momba ny teoria sy tantara ara-dalàna.
Internatique Initiatives Intern (karama): Ivotoerana iraisam-pirenena momba ny ady tsy misy herisetra, DC
Febroary 28, 2019 Jobs 0
Ny Ivotoerana Iraisam-pirenena momba ny ady tsy misy herisetra (ICNC) dia mitady internitiant Academic Initiatives (karamaina!) Ary mandray fangatahana ankehitriny. Fe-potoana fampiharana: 11 martsa. [tohizo ny famakiana…]
Fanambarana ataon'ny birao fandriam-pahalemana iraisam-pirenena: Feo ara-paminaniana ho an'ny fotoantsika - Fankalazana ny kabarin'i MLK Jr '4 aprily 1967 “Any ankoatra an'i Vietnam, mamaky ny fahanginana”
Aprily 4, 2017 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Dimampolo taona lasa izay, tamin'ny 4 aprily 1967, dia nanao lahateny i Martin Luther King, zanany izay nandritry ny taona maro lasa izay. Izy io dia iray amin'ireo fanehoana miavaka indrindra amin'ny herim-po ara-pitondrantena, ara-tsaina ary ara-panahy. Tamin'ny lahateniny dia niady tsikombakomba tamin'ny tsikera pragmatika tao amin'ny hetsika Zon'Olombelona Amerikana i King izay natahotra ny fihemorana ara-politika tamin'ny fanamelohana ny ady mahatsiravina nataon'ny filoha Johnson tany Indochina, ary nanondro ireo sakana lehibe indrindra amin'ny fahalalahana any Etazonia - sy ny Andrefana: ireo ratsy telo fanavakavaham-bolon-koditra, fanindrahindram-pirenena ary fitiavan-karena tafahoatra. Tahaka ny fahendren'ireo Mpaminany fahiny, ny tenin'i King sy ny fiantsoany “revolisionan'ny soatoavina” dia mampientanentana sy manome aingam-panahy ankehitriny toy ny dimy taona lasa izay. [tohizo ny famakiana…]
Syria: Alao sary an-tsaina ny fomba hafa
Enga anie 16, 2017 Vaovao sy hevi-dehibe 2
Inona no azo natao mba hisorohana ny habibiana mahatsiravina indrindra nitranga tany Syria? Mpanazava vaovao mihetsika iray no mandinika fohifohy ny anjara asan'ny departemantan'ny fandriam-pahalemana. Tsy manolo-kevitra ny hanana ny valiny farany izahay, fa manantena ny hampisy fisainana mamorona. [tohizo ny famakiana…]